DAAWO: “Maalintii Dhawayd Ee Aanu Maayarka Taageernay Waxaa Dhacday…” Xildhibaannadii Taageersanaa Maayirka Burco Oo Raalli-gelin Bixiyay – somalilandtoday.com
DAAWO: “Maalintii Dhawayd Ee Aanu Maayarka Taageernay Waxaa Dhacday…” Xildhibaannadii Taageersanaa Maayirka Burco Oo Raalli-gelin Bixiyay
(SLT-Burco)-Xubno ka tirsan golaha degaanka Burco ayaa madaxweynaha Somaliland raali gelin ka siiyay hadalo ka soo yeedhay maayarka Burco Maxamed Muraad, oo 24-kii bishan mar uu warbaahinta la hadlay sheegay in dhaqaalaha dalku uu cid gaara kooto ugu xidhan yahay.
Isagoona ku dooday in xeerka loo yaqaano xeer 12 ee midaynta canshuuraha degmooyinka dalka oo la sameeyay xiligii xukuumadii Cigaal uu cuna-qabatayn ku yahay goboladda bariga gaar ahaana magaaladda Burco, isla markaana ay xeerkaas ku badhaadheen saddex degmo oo keliya.
Sidoo kale badi xildhibaanadda golaha degaanka Burco oo uu wehelinayay maayar ku xigeenka Burco oo 25-kii isla bishan shir jaraa’id ku qabtay Burco ayaa taageeray hadalka maayarkoodda, iyagoona golaha Wakiiladda ugu baaqay in xeerka midaynta canshuuraha degmooyinka gebi ahaanba la baabiiyo.
Hase yeeshee waxaa arrintaasi beeniyay xildhibaanadan ka tirsan golaha degaanka Burco oo shalay warbaahinta kula hadlay magaaladda Burco waxay sheegeen in hadalkaasi laga leexiyay u jeedadii laga lahaa, isla markaana loo adeegsaday in lagu xajiimeeyo madaxweynaha qaranka iyo xukuumadiisa.
xildhibaan Maxamed Cali Tuur-tuur, oo arrimahaas ka hadlayayna waxa uu yidhi “Maalintii dhawayd ee aanu shirka jaraa’id qabanay, ee aanu maayarka taageernay iyo dantii degmadda ee aanu ka hadlaynay, waxaa dhacday in xubno naga mid ahaa ay ka hadleen wax aan dantii degmadda Burco ahayn, oo ay dhex geliyeen shirkii jaraa’id.
Iyadoo hadallo badan oo qadaf ah, oo aan lagu wada socon, oo aan dantii degmadda khusaynin ay dhex geliyeen xildhibaano mucaarad ah”.
“Xildhibaanka yidhi madaxweyne Muuse Biixoow, markaad talladda qabsatay ayaad Ceel-Afweyn dagaal gelisay, waxaanu anaguna kaga jawaabaynaa, oo umadda Somaliland oo dhan markhaati ka tahay in maalintii uu talladda dalka qabtay Muuse Biixi ilaa maantooynu joogno in uu juhdigii ugu weynaa geliyay sidii loo demin lahaa shaqaaqadda Ceel-Afweyn ka dhacday. Arrinteenuna xeer dejinta ayay ku socotay, taas ayaananu anagu ka hadlaynay”ayuu yidhi xildhibaan Tuur-tuur.
Sidoo kale xildhibaan Axmed Cabdi Dhimbiil, ayaa isna shirkaasi jaraa’id ka hadlay waxaanu yidhi “Markaanu ka hadlayno waxyaabaha danta u ah degmadda Burco, waxaa haboon in aanu isku aragti ka noqono oo xisbinimadda meel la iska dhigo. Ragg saaxiibadayo ah ayaa si kale u daba-gediyay, oo madaxweynaha qaranka iyo xukuumadda weerar ku qaaday. Kuna eedeeyay in shaqaaqooyinka bariga ka taagan uu dabadda ka riixayo madaxweynuhu”.
Isagoo hadalkiisa sii watayna waxa uu yidhi “Runtii arrintaasi waa mawqif kale, waana ka nagu soo celiyay in aanu maanta (shalay) mar kale hadalno ee aanu leenahay aynu kala saarno in aynu xuquuqda gobolkeena inagoo isku koox ah u wada doodno, oo aynu si hufan uga hadalno. Masuuliyad ayaana inaga saaran oo waa wixii shacbigu inagu soo doortay, mucaarad iyo muxaafidba dantiisa ayaanan u taaganahay.
Arrintaana maanaan jeclaysan, arrin aan wanaagsanayn ayaanay ahayd. Shaqaaqadda ka jirta Ceel-Afweyn-na waxay u baahan tahay in ninkii aan waxba ku biirinaynin in uu ka ceeb la’aado, oo uu isaga aamuso ayaa u khayr roon”.
Geesta kale xildhibaan Maxamed Ku-dhereriye, ayaa isna dhinaciisa wax laga xumaado ku tilmaamay hadaladii xildhibaanadda mucaaradka ah ku tiraabeen kuwo aanay gole degaan ahaan isku ogayn, isla markaana ay madaxweynaha iyo xukuumadiisaba ka raali gelinayaan.
“Shirkii jaraa’id ee aanu qabanay 25-kii bishan shaqsiyaad ka mid ahaa golaha degaanku waxay uga hadleen si ka duwan arrintii aanu ku wada soconay si aan ahayn. Waxaananu markii hore ku wada soconay in aanu ka danta Burco ka hadalno, anagoo u adeegayna shacbigii na soo doortay.
Laakiin xildhibaano mucaarad ah ayaa soo dhex geliyay xanaf mucaaradnimo oo aan loo baahnayn, anagana ay nagu xumaynayeen. Waxaanu ka raali gelinaynaa madaxweynaha iyo xukuumadda aanu ka soo jeedno ee aanu xisbigeedda ka soo baxnay, qadafkaa ay u gaysteen madaxweynaha raali gelin buuxda ayaanu ka bixinaynaa”ayuu yidhi Maxamed.